Abaalmarinta Caddaaladda - Sheekooyinka Guusha - Uday Hussein
Uday Hussein wuxuu ahaa Saddam labadiisa wiil kan ugu weyn ee guurkiisa koowaad, waxaana lagu yiqiin dhaqan ah naxariis darri iyo waali. Intii uu ahaa madaxa Guddiga Oliimbikada Ciraaq, wuxuu amri jiray in la ciqaabo ciyaartoyda aan sida uu doonayo sameynin. Wuxuu si toos ah ugu lug lahaa dilka laba rag oo xidid ahaa.
23-kii Luulyo, 2003, macluumaad laga helay qof xog ogaal ahaa ayaa lagu ogaaday halkii ay ku sugnaayeen Uday iyo Qusay Hussein. Iyadoo caawimaad laga helay ciidanka 101st Airborne Division, waxay ciidanka Task Force 20 sameeyeen hawlgal ay shakhsiyaadkan ku soo qabteen. Waxaa halkaasi ka dhacay dagaal rasaas la isku weydaarsaday oo socday afar saacadood, waxaana dhacday in ay ku dhintaan Uday iyo Qusay Hussein.
Barnaamijka Abaalmarinta wuxuu abaalmarin ku bixiyey macluumaada keentay helitaanka halkii ay ku sugnaayeen Uday iyo Qusay Hussein.